Obodo WWTP - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Ọnọdụ: Obodo Plymouth, USA
Tekwughachi ikike: 19m3/ d
WTPdị WTP: Ngwaọrụ FMBR jikọtara WWTP
Process: Mmiri mmiri → Pretreatret → FMBR → Ọfụma
Nkọwapụta :lọ Ọrụ:
Na Machị 2018, iji chọpụta teknụzụ ndị na-eduga n'ọhịa nke mmiri mmiri na-ekpo ọkụ wee nweta ebumnuche nke mbenata ike oriri nke ọgwụgwọ mmiri mkpofu, Massachusetts, dị ka ụlọ ọrụ ike zuru ụwa ọnụ, na-arịọ ọha na eze iji teknụzụ na-egbu mmiri n'ụwa niile. , nke ụlọ ọrụ Massachusetts dị ọcha (MASSCEC) nọrọ na ya, wee rụọ ọkwọ ụgbọ mmiri ọhụụ ọhụụ na ọhaneze ma ọ bụ ikike ikike ịgwọ mmiri na Massachusetts.
MA State Environmental Protection Agency haziri ndị ọkachamara nwere ikike ka ha duzie nlebara anya otu afọ nke usoro ikike ike, atụmatụ mbelata oriri, atụmatụ injinia, yana usoro chọrọ nke teknụzụ anakọtara. Na Machị 2019, gọọmentị Massachusetts kwuputara na Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. “FMBR Technology” ahọrọ ma nyekwa ya ego kachasị elu ($ 150,000), a ga-eduzi onye ọkwọ ụgbọ elu na Plymouth Airport Wastewater Treatment Plant in Massachusetts.
Ihe na-ekpo ọkụ nke FMBR na-emeso ya bụ ihe na-adịgide adịgide ebe ọ bụ na arụ ọrụ ahụ, na ọnụ ọgụgụ bara uru nke index ọ bụla dị mma karịa ọkọlọtọ mpaghara (BOD≤30mg / L, TN≤10mg / L).
Onu ogugu iwepu akwukwo obula bu:
Amonia nitrogen: 98.7%
Loctation: Obodo Lianyungang, China
Treatment ikike: 130,000 m3/ d
WTPdị WTP: Ilitydị FMdị FMBR WWTP
Oru ngo Nkọwa:
Iji kpuchido gburugburu obibi gburugburu ebe obibi ma gosipụta ọdịdị nke obodo ndị dị n'ụsọ osimiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gọọmentị ime obodo họọrọ teknụzụ FMBR iji wuo ebe a na-elekọta ogige nsị na gburugburu ebe obibi.
Dị iche na teknụzụ ọgwụgwọ mmiri na-ekpo ọkụ nke nwere nnukwu akara ụkwụ, isi ísì ụtọ, na ọnọdụ owuwu ala dị elu, ụlọ ọrụ FMBR nakweere echiche nke ihe ọkụkụ na-emepụta ebe obibi nke ụlọ "n'elu ala ogige na ebe a na-agwọ mmiri nsị". Usoro FMBR a nakweere wepụrụ isi ihe ndozi, anaerobic tank, anoxic tank, aerobic tank, na nke abụọ sedimentation tank nke usoro ọdịnala, ma mee ka usoro ahụ dị mfe ma belata oke akara ụkwụ. A na-ezobe ebe niile na-ekpofu nsị mmiri ala. Mgbe nsị mmiri gafere mpaghara mmebe ahụ, mpaghara FMBR, na disinfection, enwere ike ịhapụ ya ma jiri ya dị ka mmiri maka ịkọ ahịhịa na ihu igwe mgbe ị na-ezute ọkọlọtọ. Dika nhuru ahihia nke ahihia nke FMBR belatara nke ukwuu, odighi isi obula, ma osisi ahu di enyi na enyi. E wuru mpaghara osisi ahụ niile na ogige ntụrụndụ mmiri na-emepụta mmiri, na -emepụta ụdị ọhụụ nke usoro ọgwụgwọ nsị na nkwekọ gburugburu ebe obibi na weghachite mmiri.
Loctation: Nanchang City, China
Treatment ikike: 20,000 m3/ d
Iji dozie nsogbu gburugburu ebe obibi na-akpata site na nsị ụlọ, na iji meziwanye ogo gburugburu ebe obibi mmiri mmiri, ma n'otu oge ahụ, na-atụle ọghọm nke osisi ọgwụgwọ mmiri nsị, dị ka nnukwu ọrụ ala, nnukwu ísì, kwesịrị ịnọ pụọ na ebe obibi na nnukwu itinye ego na netwọkụ ọkpọkọ, gọọmentị ime obodo họpụtara teknụzụ JDL FMBR maka ọrụ ahụ, ma nakweere echiche nke "Park dị n'okpuru ala, ụlọ ọrụ ọgwụgwọ n'okpuruala" iji wuo ụlọ ọgwụ na-ekpofu ahịhịa gburugburu ebe obibi nwere ikike ọgwụgwọ kwa ụbọchị. 20,000 m3/ d. A na-ewu ụlọ ọrụ mmiri nsị n'akụkụ ebe obibi ma kpuchie ya naanị 6,667m2. N'oge ọrụ ahụ, enweghị isi ọ bụla na sludge organic fọdụrụ belata. A na-ezobe ihe owuwu nke osisi ahụ n’ime ala. Na ala, a na-ewu ya n'ime ogige China nke oge a, nke na-enyekwa ohere maka ebe obibi obibi obibi maka ụmụ amaala gbara ya gburugburu.
Ọnọdụ: Huizhou City, China
Ọgwụgwọ ikike: 20,000 m3/ d
WWTP Ụdị: Ngwaọrụ FMBR akụrụngwa WWTP
Usoro: Raw Wastewater ret Pretreatret → FMBR → Ọfụma
Ala gbara osimiri okirikiri Park FMBR STP dị na Huizhou City. Ezubere usoro ọgwụgwọ mmiri mmiri mmiri dị 20,000m3/ ụbọchị. Isi WWTP bụ tank oriri, tankị ngebichi, tankị ejupụta, akụrụngwa FMBR, tank na-enweghị mmanụ na tụọ ihe. A na-achịkọta mmiri mkpofu site na ogige ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ebe a na-ere mmiri, mmiri azụ azụ, dragon n'ọnụ mmiri, ebe a na-akpọ Qianjin na ebe obibi n'ụsọ oké osimiri. A wuru WWTP na oke osimiri, nsod na ebe obibi, nwere obere akara ụkwụ, obere ihe fọdụrụ nke sludge na-ewepu ma ọ dịghị isi na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nke na-adịghị emetụta gburugburu ebe obibi.